Sayid Qudub | maktabadda | Af-Soomaaliga
Tag Archives: Sayid Qudub
03/10/2017 DiintanSayid Qudubmaamule
P.O. Box 7492, Beirut, LEBANON
P.O. Box 2409, Damascus, SYRIA
Filmset by THE GRAPHIC ARTS SERVICES Beirut
MIDOWGA ISLAAMKA CAALAMIGA EE URURADA ARDAYDA
1400 A.H. – 1980 A.D.
Waxaa jirta xaqiiqa bilow ah oo dabeecadda diintan ah iyo habka uu ugu hawlgelayo nolosha aadamiga. Xaqiiqadaasi bilowga ah ee fudud waa la iloobaa ama khalad baaba laga fahmaa. Illowgeedaasi iyo tixgelin-la’anteedaasi waxaa ka dhasha khalad wcyn marka diintan la gudagelayo, ha ahaato xaqiiqadeeda dhabta ah, taariikhdeeda waaqiciga ah ee waqtigan iyo Mustaqbalkeedaba.
Dadka qaarkii waxay Islaamka ka filayaan, maa daama uu yahay mid Eebbe soo dejiyey, inuu nolosha banii’aadmiga ugu hawlgalo si mucjiso ah, caqligalka ka weyn, oo sababo aan la malayn karin leh. Waxay ka filayaan inay u socoto iyadoon la tixgelin dabiicadda banii’aadmiga, awooddooda fidriga ah iyo waaqicigooda maadiga ah ee marxaladaha kala geddisan ee hor-u-marka banii’aadmiga bii’ad kasta noloshiisa ka mid ah.
Marka ay arkaan inaanu habkaasi ku socon, oo ay la hawlgelayaan awoodda aadamiga ah ee xaddidan, iyo waaqiciga maadiga ah ee nolosha banii’aadmigu, mar-marka qaarkoodna labadaasi arrimood si cad oo sugan ay diintu usoo jiidato. Mararka qaarkoodna ay ka hortimaaddo. Ay xoojiyaan shahawaadka iyo damaca aadmigu, tabardarridooda iyo nuqsaantooda, iyagoo iska-hortaagaya sidii ay u raaci lahaayeen baaqa diinta, jidkeedana ay ugu socon lahaayeen.
Marka ay taasi arkaan ayuu niyad-jab lama filaan ahi ku dhacaa. Waxaana waxyeello gaadhaa kalsoonidoodii ay u hayeen diintan iyo habkeeda nolosha. Mararka qaarkoodna shaki ayaa diintaba ka gala.
Sidaas awgeed, qaladaad farabadan ayaa ka dhasha qalad keliya oo aasaasi ah. Kaasi oo ah iyadoo khalad laga fahmay diintan iyo habka ay u socoto ama la illoobay oo loga tallaabsaday xaqiiqadaasi bilowga ah ee fudud.
Diintani waa hab Ilaahi ah ee nolosha banii’aadmiga. Xaqiijinteeda nolosha aadamiguna
waxay ku xidhan tahay dedaalka banii’aadmiga naftiisa ee aan dhaafsiinayn awoodiisa aadami iyo soohdinta waaqaca maadiga ah ee nolosha dadka bii’ad sugan. Hawshuna waxay ka bilaabantaa meesha uu aadamigu ka helayo qalabka loo baahan yahay. Waxayna soconaysaa ilaa dhammaadka jidka iyadoon la dhaafayn soohdinta awoodda aadamiga iyo dedaalka ay ku bixiyaan awoodaasi.
Astaanta gundhigga ah ee Islaamku waa: Mar keliya ma iloobo, mar kasta iyo meel kastaba, jiritaanka aadamiga iyo xuduudda awoodiisa, iyo waaqica noloshiisa maadiga ahba. Isla-mar-ahaanta, wuxuu gaadhsiinayaa. Sida marar-horeba dhacday, dhicina karta, haddii la sameeyo dedaalka lagama maarmaanka ah, heer aanu hab keliya oo banii’aadmigu samaystay gaadhin. Taasi oo lagu gaadhi karo si hawlyar, raaxo leh sugan oo qumman.
Khaladka oo idili xuxuu ka yimaadaa marka laga tallaabsado ama la iloobo dabeecadda diintan, ee laga filo khawaariq dhalan-rogta jiritaanka dadka ee aan oggolayn awoodiisa xadidan, tixgelina waaqaca maadiga ah ee bii’addaasi.
Miyaan diintan Ilaahay soo dejin? Miyaanu Ilaahayna wax kasta awoodi karin? Hadaba maxay diintani ugu hawlgashaa oo keliya soohdinta awoodda aadamiga ee xadidan? Maxayna go’aanada hawlgalkaasi ugu egyihiin tabar-yaraanta aadamiga? Maxayna had-iyo-jeer u guuleysan weeyday? Dadka wataana maxay had-iyo-jeer u heli-waayeen guusha? Maxay mararka qaarkood saafinimadeeda iyo nadiifnimadeeda uga kor-maraan shahawaadka iyo maadaduba? Maxay mararka qaarkoodna dadka baadilka wadaa uga guuleystaan dadka xaqa ku taagan? Arrimahaasi oo idili, sida aynu aragno, waa su’aalo iyo qalad fahan ka soo abuurmay xaqiiqadii bilawga ahayd ee laga tallaabsaday ee ay iska-lahayd dabeecadda diintan iyo habka ay u hawlgasho.
Run ahaantii, Ilaahay wuu awoodaa inuu ku bedelo abuuritaanka aadamiga jidka diintan ama jid kaleba. Laakiin Isagaa sarreeyc Wuxuu doortay inuu dadka u abuuro fidradaasi uu ku sugan yahay. Taasina ay ugu wacan tahay xikmad uu isagu uun ogyahay. Wuxuuna doonay inuu hanuunka ka dhigo midhaha ka soo baxa dedaalka iyo doonista hanuunintaasi.
“Kuwa noo soo jihaada, waxaanu ku soo toosinaa jidadkannaga.”
Wuxuu kaloo doonay inay fidrada aadamigu noqoto mid had-iyo-jeer hawlgasha oo aan marnaba istaagin, caddilminna.
“Nafta iyo waxa wadaba. Wuxuu ku ilhaamiyey xumaan iyo Alle-cabsi. Waxaa liibaanay kii nadiifiya. Waxaana hoogay kii qarriba.”
Wuxuuna doortay inuu ku dhammaystiro xaqiijinta habkiisa Ilaahiga ah ee nolosha aadamiga, jidkaasi ah dedaal aadami oo ku eg xuduudda awoodda dadka.
“Run-ahaantii, Ilaahay ma bedelo xaaladda ay dad ku sugan yihiin ilaa ay dadkaasi bedelaan waxa naftooda ku sugan.”
“Haddii aanu Ilaahay sugeen in dadka qaarba qaar wax u diidayaan waxaa kharribmi lahaa dhulka oo idil.”
Wuxuuna doortay inuu dadka ku gaadhsiiyo waxaasi oo idil, hadba siduu dedaal ula yimaaddo iyo awoodda uu bixiyo. iyo dhibta uu u samro si uu xaqiijiyo habkaasi Ilaahiga ah ee qumman, naftiisuna uga meydho xumaan oo idil. nolosha ku xeeran oo idilna u hagaajiyo.
“Ma waxay dadku moodeen in lagu dhaafayo inay yidhaahdaan oo keliya, ‘Waanu rumaynnay,’ iyagoon la imtixaanin? Waxaannu imtixaannay kuwii ka horeeyey. Runlowga ah iyo kuwa beenlowga ah.”
Mana aha in qof khalqiga Ilaahay ka mid ahi weydiiyo Ilaahay sababta uu u doortay sidaasi uu isagu doonay. Mana aha in qof khalqigiisu ka mid ahi, maa daama aanu qofna ahayn Ilaah, aanuna lahayn cilmi iyo awood cilmi toona, weydiiyo nidaamka guud ee uunkan iyo go’aanada nidaamka ee ku dhex-jira dabiicadda khalqi kasta oo ka mid ah jiritaanka.
Waayo? Waxaa la xidhiidha su’aal aanu weydiin karin mu’min dhab ah, weydiina karin mulxid dhab ahi. Mu’minka dhabta ahi waxaanu u weydiin karin waayo aadaabtiisu xagga Eebbe way ku weyn tahay. Eebbahaasi oo uu si fiican u garanayo naf-ahaantiisa, sifooyinkiisa iyo astaamihiisaba. Aqoon weyn u leeyahay dabeecadda garaadkiisa aadamnimo iyo soohdimihiisaba taasoo aanay suuragal u ahayn inay ka hawlgasho aaggaasi. Mulxidka dhabta ahina wuxuunu u weydiin karin waayo mabo aqoonsana jiritaanka Ilaahay haba yaraatee. Haddii uu isagu aqoonsado Ilaahnimadiisa wuxuu isla-mar ahaantaas garanayaa haybadiisa iyo astaamaha Ilaahnimadiisa. Lamana weydiin karo wuxuu falo. Hadana wey weydiinayaan. Waayo isagoo keliya ayaa wax walba og. Ogna wixii uu falo.
Su’aashaasi waxaa weydiin kara oo keliya mid dheel-dheelaya oo geleb-gelab ah. Aan ahaynaa mu’min dhab ah iyo mulxid dhab ah toona. Sidaas awgeed loomaba baahna in wax ka soo qaadba uu yeesho oo layskuba hawliyo. Mid jaahil ah ayuun baa weydiin kara xaqiiqada Ilaahnimada iyo astaamaheeda. Sida keliya ee wax lagu bari karaa kaasi jaahilka ahina waa iyadoon jawaab toos ah la siinin, ee la garansiiyo xaqiiqada Ilaahnimada iyo astaamaheeda.
Haddii uu garto oo uu rumeeyo waa qof mu’min ah markaasi. Haddii uu dafiro oo uu diidana waa mulxid. Sidaas ayay dooduba ku dhantahay ilaa uu muran yimaaddo. Haddii dooddu isku bedesho muranna qofka Muslimka ah loomaba oggola inuu laba sii wado.
Gabagabada ay arrintaasi ku soo dhammaanaysaa waa in aanu qof khalqiga Ilaahay ka mid ahi su’aali karin sababta uu Ilaahay u doortay inuu banii’aadmiga sidaasi u abuuro (fidradaasi). Muxuuna u doortay inuu ku waariyo fidradiisaasi inay noqoto mid hawlgal joogta ah leh oo aan marnaba kala go’ayn. Muxuuna u doortay inuu ka dhigo habka Ilaahiga ah ee noloshiisa aadminimo inay ku suura-gasho jidkaasi ah dedaal banii’aadmi oo ku eg xuduuda awoodda aadamiga. iyo waaqaca maadiga ah ee noloshiisa. Kamuuna yeelin inuu ahaado mid ku suurogala hab caqli-galka ka weyn oo leh sabab qarsoon oo aan la ogaan karin.
Laakiin waxaa lagama maarmaan ah in qof kasta oo khalqigiisa ka mid ahi ogaado xaqiiqadaasi oo uu garto, indhihiisana ku arko iyadoo si dhab ah uga hirgalayso waaqaca nolosha banii’aadmiga. Waana inuu xaqaa’iqa taariikhda banii’aadmiga ku muujiyaa Iftiinkaasi, isagoo dhinac ka og jidka socodkeeda taariikhiga ah, dhinaca kalena ka og sidii uu u wajihi lahaa, ugulana noolaan lahaa xikmadda Ilaahay iyo qadarkiisa, meesha saxa ahna iskaga taagi lahaa.
Habkaasi Ilaahiga ah ee uu matelayo Islaamka suuraddiisa kama-dambeysta ah siduu innoo keenay Nebi Muxammad () ugana suurogelayo dhulkani, iyo adduunkanba si uu kor ka imanayo uun.
Kumana suura-gelayo erayga Ilaahiga ah ee ah “Noqo!” uun oo loo caddeeyo kumana suura-gelayo maquunis Ilaahi ah oo la mid ah sida uu u wado uunka ku wareegaya falaga iyo socodka kowkabyada, ee wuxuu ku suura-gelayaa isagoo uu qaado urur dadka ka mid ah, oo iimaan buuxa ku rumeysan una oogaya sidiisa dhabta ah inta karaankoooda ah, kuna dedaalaya inay ku sugaan quluubta dadka kale iyo noloshoodaba. Kuna jihaadaya himiladaasi wixii karaankooda ah oo idil. Waxay la jihaadayaan tabar-daridda aadamiga iyo hawada naftooda. Waxayna la jihaadayaan dadka ay tabar-yarida iyo hawada iska hortaagtay iney helaan hanuunintaasi. Waxayna gaadhayaan intaas oo dhan kadib marka uu habkaasi xaqiiqoobo, heer ay fidrada aadamiga ku suuragasho una diyaarsan waaqaca maadiga ah. Waxayna dadka kala bilaabaan meesha ay ku sugan yihiin mana is-madax-mariyaan xaaladdooda dhabta ah iyo waxay rabaan, iyagoo ku socda oo maraya marxaladaha habkaasi Ilaahiga ah. Ururkaasi wuxuu ka adkaan naftooda iyo nafta dadka kaleba mararka qaarkood. Mararka qaarkoodna. waxaa jebin naftooda iyo kuwa dadka kale. Si hadba le’eg dedaalka ay bixiyaan iyo wasiiladda ay u doortaan diritaasi ee ku habboon munaasabadda xilligaasi iyo baahida waqtigaasi. Waxaana intaasi oo idil ka sii muhiimsan sida ay xil isaga saaraan xaqiijinta habkaasi iyo hirgelintiisa dhab ahaaneed marka la eego waaqacooda iyo asluubtooda gaar-ahaaneed.
Waa taasi dabiicadda diintan iyo jidkeeduba, waana taasi qorshaheeda, hawlgalka, dhaqdhaqaaqeeda iyo habkeeduba. Waana taasi runta uu Ilaahay rabo inuu baro bulshada Muslimka ah marka uu yidhi: “Run ahaantii, Ilaahay ma bedelo xaaladda ay dad ku sugan-yihiin ilaa ay dadkaasi bedelaan waxa naftooda ku sugan.”
“Haddii aanu Ilaahay sugeen in dadka qaarba qaar wax u diidaan waxaa kharribmi lahaa dhulka oo idil.”
“Kuwa noo soo jihaada, waxaanu ku soo hadayn jidadkannaga.”
Waa taasi xaqiiqada uu Ilaahay doonay inuu baro bulshadii Muslimiinta Dirirtii Uxud markii ay suurogal noqon weyday inay matasho xaqiiqada dhabta ah ee diintani naf-ahaanteeda xilliyo ka mid ah dirirta. Waxay ka tallaabsatay oo ay illowday xaqiiqada bilowga ah. Waxayna u maleeyeen in guushoodu qasab tahay maa-daama ay Muslim yihiin, Ilaahayna wuxuu ku yidhi:
“Markii ay idinku timid dhibaato la mid ah, mid aad hore u aragteen waxaa tiraahdeen, ‘Maxay sidani u dhacday?’ Ku dheh, ‘Xaggiina ayey ka timid.'”
Wuxuuna ku yidhi Ilaahay:
“Wuu rumeeyey ballankiisii ahaa in oggolaanshihiisa aad ku tijaabisaan. Laakiin waa fashi-sheen, arrinkiina waa isku dirirteen. Waana caasideen kadib markuu idin tusay waxaa jeceshihiin. Waxaa idin kamid ah mid Aakhiro doonaya. Wuuna idinka jeediyey si uu idin imtixaano,”
Bulshadii Muslinka ahayd waxay xaqiiqadaasi baratay Dirirtii Uxud kumay baran hadal iyo canaan toona, ee waxay ku baratay dhiig iyo dhibato xanuun leh.
Waxayna bixisay wax qaali ah jebitaan ka dambeeyey guul, khasaare ka dambeeyo dhereg iyo dhaawac aan cidna dhaafin, iyo shuhado sharaf leh oo uu kamid yahay shuhadada Xamse Ilaahay raalli haka noqdee. Waxaana intaasi oo idil ka sii daran oo bulshada Islaamka kaga sii xumaa, waxaa lagu dhaawacay Rasuulkii Ilaahay ().
Waxaa la dakhray wajigiisii sharafta lahaa. Waxaana lagu jebiyey dhooshiisii ilkaha. Wuxuuna ku garab dhacay godkii uu qoday Abuu Camar kii faasiqa ahaa ee reer Quraysh la jiray soo gaadhay. Isagoo keligii ay la joogaan in yar oo asxaabtii ka mid ah oo marba mid la dilayo intii ay daafacayeen, mid ka mid ahina Abuu Dajaana uu dhabarkiisa ugaga dhigayo fallaadhaha ay mushrikiintii kusoo gamaysay, waxaana kolba dharkiisa ku dhacayey fallaadh laakiin kamuu dul dhaqaaqin ilaa ay Muslimiintii soo rogaal celisay iyagoo helay dersigaasi kulul ee qadhaadh. Waxaa haddaba inoo cad in suuro-gelinta habkaasi Ilaahiga ahi lagu gaadhayo dadaalka banii’aadmiga, xaqiiqana ay tahay inuu ku suura-gelayo xuduudda karaanka aadamiga taaso toosinaysa nafta dadka hagaajinaysana nolosha banii’aadmiga. Waxaynanu sidaas u leenahay ma aha inaynu sabab u yeelayno doonista Ilaahay si arrinka aynu uga dhigno sidii uu ka dhigay, laakiin waa inaynu tusno eegmo dhab ah waxyaalaha ka soo baxa hawshaasi doonistiisa ah ee nolosha addoomadiisa.
Xaqiiqada iimanku kuma dhammaystirmayo qalbiga ilaa dadka loo soo bandhigo halgan arrinka iimaankaasi ah. Qalbiga oo ay ka halgamaan oo ay ka nacaan baadilkooda iyo jaahiliyaddooda, goostaanna inay u raraan dhinaca xaqa iyo Islaamka.
Carrabkana ay ka halgamaan iyagoo gaadhsiinaya una caddaynaya dadka. Diidaanna baadilka aan meelna haysan. Caddeeyaanna xaqa uu inoo keenay Islaamku. Ka halgamaan gacanta si ay uga riixan hor-joogsiyada jidka hanuuka marka laga horkeeno xoog naxariis-darro iyo caga-juglayn qayaxan.
Halgankaasi waxaa lagula kulmi dhibaato iyo xanuun, waxaana loo baahan yahay dulqaad iyo sabir loo yeesho dhibaatada iyo xanuunkaba, loona sabro guul-darrada iyo guushaba, waayo sabirka guusha ayaa ka adag sabirka guul-darrada. Markaasi ayaa la sugnaanayaa, lana noqonaynin beerka jecli, xaydha jecli. Waana la toosayaa, lana leex-leexanaynin, waxaana loo qabsanayaa jidka iimaanka si cad oo qumman.
Xaqiiqada iimaankuna dhammaystirmayso qalbiga ilaa uu usoo banbaxo inuu dadka kula halgamo arrinka iimaanka. Waayo wuxuu la halgamayaa naftiisa marka uu dadka kale la halgamayo, waxaana iimaankiisa uga furmaya albaabbo aan u furmeen weligiina haddii uu iska fadhiyi lahaa isagoo xasiloon. Waxaana uga caddaanaya dadka iyo noloshaba xaqaa’iq aan weligiina u caddaadeen haddii aanu jidkaasi marin, waxayna gaadhayaan naftiisu, dareenkiisu, aragtidiisu, caadooyinkiisu, dabcigiisu iyo facaa’ilkiisuba hher aanay gaadheen weligood haddii aanu soo marin tijaabadaasi qadhaadh ee kulul. Taasina waxay ka mid tahay waxyaalaha uu Ilaahay innagu tilmaamay hadalkiisa:
Wax kharribmana waxaa ugu horeeya kharribaadda nafta oo la imanaysa istaag ay ruuxa joojinayso, himmadana laciifinayso ilaa ay ka dhigto wax mayd ah, sidaasi ayey kadibna nolosha oo idili unoqonaysaa mid mayd oo kale ah, oo ku dhaqdhaaqaysa oo keliya jawiga shahawaadka oo keliya. Sida ku dhacda ummadaha ku ibtilooba nimcada.
Taasina waxay ka mid tahay fidrada uu Ilaahay u abuuray dadka, wuxuuna ka yeelay qummanaanta fidrada mid la socota halganka loo halgamayo hirgelinta habka Ilaahay ee nolosha banii’aadmiga, taasi oo lagu gaadhayo dadaalka aadamiga ee ku eg xuduudda awoodda iyo karaanka aadamiga.
Halgankaasi iyo imtixaankaasi la socdaa waa sida lagu kala soocayo dadka isku dhex jira kadib markii nafaha la sifeeyey waxaana laga dhex-saarayaa dadka liita iyo kuwa iska-yeelyeelka ah, kuwa nafta iyo qalbiga jilicsan leh. kuwa ah khaa’imiinta, munafiqiinta iyo kuwa dadka is-tusaya. Waana tani xaqiiqadii uu Ilaahay doonay inuu baro bulshadii Muslinka ahayd iyadoo loo soo bandhigayo imtixaan, loona soo bandhigayo dhibaato, lana qeexayo waxyaalaha nafta ku dahsoon. Sidoo kalana la kala-soocayo dadkii isku dhex jiray iyadoo la marinayo dhibaato, tijaabooyin culus iyo xanuun qadhaadh.
Waana tani xaqiiqadii uu Ilaahay doonay inuu baro bulshada Muslimka kadib Dirirtii Uxud, markii uu yidhi isagoo ka jawaabaya su’aashii Muslimiinta, “Waa maxay sidani?” Ku dheh, “Xaggiinna ayay ka timid.”
Wuxuuna isagoo sii wada yidhi, “Waxa idin gaadhay maalintii ay labada col kulmeen waa wax ku yimid oggolaanshaha Eebbe, si uu u ogaado kuwa mu’miniinta ah iyo kuwa munafiqiinta ah.”
“Ilaahay umuu gelin mu’miniita xaaladdassi aad ku jirtaan sabab kale ee waxay ahayd uun inuu ka dhex-saaro ka xun kuwa fiican.”
“Iyo inuu Ilaahay ogaado kuwa rumeeyey, idin kalana dhex baxo shuhado. Ilaahayna ma jecla daalimiinta, ee inuu imtixaano kuwa rumeeyey dabar-gooyana gaalada.”
Intaasi oo idil wuxuu ka daadegeyaa dareenkooda iyadoo isla mar-ahaantaa dhibaatada gaadhay oo dhan ay ugu wacnayd si xaqiiqada iimaanku uga daadegto dareenkooda iyo falalkooda marka dagaalka. Ugu dambayntii, waxay u ahayd deris iyo daahiraad iyo dadkoo la kala soocayey. Intaasi oo idilna waxay khayr u ahayd naftoodii iyo noloshoodii dambe.
Iyadoo la tix-gelinayo dabeecadda dhabta ah ee diintan iyo jidkeeda ay ku hawlgelayso, waxaa lagama maarmaan ah in caddaynada aynu soo sheegnay ku kor-dhinno tusaalooyin dhammays-tir ah. Hirgelinta habkaasi Ilaahiga, waxaa loo daayey xaqiijintiisa dedaalka aadamiga, oo ku eg xuduudda karaanka banii’aadmiga iyo xuduudda waaqaca maadiga ah ee nolosha aadamiga xilliyada kala geddisan ee hor-u-marka iyo bii’adaha duwan, loogamana jeedo taasi ka maaran kama-dambays ah oo dadku ka maarmayo arrintaasi, iyo go’intaan qadarka Ilaahay iyo qorshihiisa, gacan-fidintiisa iyo caawinaadiisa, waafajintiisa iyo sahliddiisa. Haddii arrinka sidaasi loo eegana wuxuu khilaafsan yahay gundhigyada dabeecadda aragtida Islaamka.
Waxaynu hore usoo caddaynay inuu Ilaahay gargaarayo qofkii usoo jihaada hanuunka:
“Kiinoo soo jihaada waxaanu kusoo toosinnaa jidadkannaga.”
Iyo inuu xaaladda dadka bedbedelo, marka ay bedelaan waxa naftooda ku sugan.
“Ilaahay ma bedelo xaaladda dad ku sugan yihiin, ilaa ay iyagu bedelaan waxa naftooda ku sugan.”
Labadaasi odhaahood waxay inoo caddaynayaan cilaaqaadka ka dhexeeya dadaalka aadamiga ee dadku la imanayo iyo gargaarka Ilaahay usoo fidinayo aadamiga, taaso ay ku gaadhayaan jihaadkoodaasi khayr iyo hanuun, wanaag iyo liibaan.
Kama dambaysta meel-marka ahi waa iraadada Ilaahay uun, taasoo aanu la’aanteed aanu qofka banii’aadmiga ahi waxba gaadhi karin, laakiin iraadadaasi waxay gargaaraysaa ka garanaya jidkeed, hawlgalka, kaashanaya gargaarkeeda, u jihaadayna Ilaahay dartii si uu u gaadho raalli-ahaanshihiisa.
Tiiyoo waxaasi oo idili jiraan, haddana qadarka Ilaahay ayaa ku xeeran dadka iyo hawlahaba, isaga uun baana dhammays-tiraya gaba-gabada wixii khayr iyo dhibaalaba lala kulmo. Waana taasi xaqiiqada uu Ilaahay doonay inuu baro bulshada Islaamka ah, isagoo tusaale-ahaan ugu caddaynaya Diririii Uxud sababaha guusha iyo guul-darradaba isagoo isla-mar-ahaantaa diirka ka qaadaya xikmadda Ilaahay ee ka dambaysa imtixaanka guusha iyo guul-darradaba: “Ilaahay wuxuu oofiyey ballankiisii ahaa inuu ogaanshihiisa aad ku imtixaantid ilaa aad fashisheen oo aad isku dagaasheen. Markaasna aad caasideen kadib markii uu idin tusay wixii aad jeceshihiin. Waxaa idinka mid ah mid adduunya uun doonaya, waxaana idinka mid ah mid Aakhiro uun u jeeda. Markaas ayuu idinka jeediyey si uu idin imtixaano.”
Waxaa kale ee uu Ilaahay uga jeeday inuu tuso sunnada dhan ee Ilaahay iyo qadarkiisa kama-dambaysta ah iyo awooddiisa buuxda ee ka dambaysa wixii dhacaya oo idil.
“Haddii dhibaato idin soo gaadho, dadka kaleba dhibaato taasoo kale ah ayaa soo gaadhay, maalinbana reer baanu usoo wareejinnaa si uu Ilaahay u gaadho, kuwa llaahay rumeeyey, idiin kalana soo dhex baxo shuhado Ilaahayna ma jecla kuwa daalimiinta ah, si uu Ilaahay u sifeeyo kuwa rumeeyey, una dabar-gooyo kuwa gaalada ah.”
Sidaas awgeed, gabagabada kama-dambaysta ahi waxay ku dhammaanaysaa qorshaha Ilaahay, doonistiisa iyo qadarkiisa, si ay ugu dhammaato wixii uu rabo uun, kadib sababaha iyo walxaha. Waana arrinta aanu qofna su’aali karin Ilaahay.
Waayo waa haybaddiisa Ilaahiga ah ee aanu qofna su’aali karin. Waana taasi xaqiiqada iimaanka sugani ee aan nafta ka daadagayn ilaa uu ku xasilo, oo uu hoy ka samaysto. Waana taasi tusaalaha dhammays-tirka ah ee lagama-maarmaanka inaynu ku kordhinno dersigan. Qofka Muslimka ah ee ay qalbigiisa ka daadegto dabeecadda diintani ma la kulmayo wax iska hor-imaad ah, wax iska hor-imaad ah oo ku jira Kitaabka Ilaahayna ma jiro.
HAB GAAR AH
Waxaa laga yaabaa inuu immika qof yidhaahdo, “Haddii uu Islaamku yahay hab Ilaahi ahi ee nolosha banii’aadmiga oo aan dhulka ka hirgelayn iyo adduunyadaba iyadoo lala yimaado dedaal aadami mooyaane, kaasoo ku eg xuduudda karaanka iyo awoodda aadamiga iyo xuduudda waaqaca maadiga ah ee nolosha banii’aadmiga ee bii’adaha kala geddisan, haddaba maxaa ka duwaya oo uu kaga geddisanaanayaa hababka banii’aadmigu sameeyeen ee naftooda u dhigteen kuna gaadhayaan awoodda ay kolba ku bixiyaan ee ku eg xuduudda karaankooda iyo waaqacooda?”
Maxaanay waajib inoogu tahay inaynu isku dayno hirgelinta habkaasi, haddii uu u baahan yahay dedaal banii’aadmi sida hababka kale oo idil? Oo aanu marnaba ku higelayn mucjiso lala yaabo, ama maquunis Ilaahi ah? Ee uu ku hirgelayo uun nolosha banii’aadmiga dhexdeeda oo ku eg xuduudda fidrada aadamiga, karaankooda caadiga ah iyo arrimahooda waaqiciga ah? Marka ugu horreeya waxaa qasab inagu ah inaynu isku dayno xaqiijinta habkaasi inagoo ka bilaabaynaa inaynu marka hore nafteenna ku hirgelinno sifada Islaamka: Tiirka ugu horeeya ee Islaamkuna waa: inaynu qirno in Ilaahay mooyee aan ilaah kale (xaq lagu caabudo) jirin, Maxammedna uu yahay Rasuulkii Ilaahay. Qiridda “Ilaahay mooyee ilaah kale ma jiro,” micnaheeda saxa ahi waa in Ilaahay oo keliya loo daayo Ilaahnimada. Wax khalqigiisa ahna aan lala wadaajin wax haba yaraadee sifooyinkiisa ka mid ah sifada ugu horreysa ee Ilaahnimadina waa xukunka guud ee ay kasoo unkanto xaqa uu u leeyahay inuu dadka loo dejiyo sharci, iyo xaqa uu u leeyahay inuu dadka u dhigo habka noloshooda, iyo xaqa uu u leeyahay inuu dadka u dejiyo qiimayn ay ku qotonsato noloshani. Qiridda “Laa ilaaha illa Allaah,” ma suuragelayso mana hirgelayso ilaa la aqoonsado inuu Ilaahay oo keliyi u leeyahay xaq inuu dejiyo habka ay nolosha banii’aadmigu ku socoto, hab kalena aanu meesha soo geli karin qof allaale qofkii isku daya inuu u dejiyo hab kale nolosha dad banii’aadmiga ka mid ah, wuxuu u sheegtay ilaahnimo. Waayo wuxuu shegtay sifadii Ilaahnimada ugu weynayd. Qof allaale qofkii u qira habkiisaasina wuxuu ka dhigtay ilaah yar oo aan Ilaahiisa weyn ahayn.
Micnaha saxa ah ee “Maxammedna waa Rasuulkii Ilaahay,” waa in la rumeeyo in habkaasi uu inaga soo gaadhsiiyey Ilaahay, inuu yahay run ahaantii habkii Ilaahay ee nolosha banii’aadmiga. Habkaasi oo keliyina yahay habka inagu qasabka ah inaynu ku hirgelinno nolosheenna iyo nolosha banii’aadmiga oo idil. Waxa haddaba innagu qasab ah inaynu isku dayno hirgelinta habkaasi, si ay nafteenna ugu xaqiiqowdo sifada Islaamka ay aynu sheeganayno. Mana hirgelayso ilaa aynu qiro shahaadada “Laa ilaaha illa Allaah Muxammadun Rasuul Allaah,” Ilaahay mooyee ilaah ma jiro, Maxammedna waa Rasuulkii Ilaahay. Shahaadadaasina ma sugna ilaa Ilaahay oo keliya loo daayo Ilaahnimada, loona daayo in isagoo keliyi xaq u leeyahay inuu dejiyo hab nololeed, layskuna dayo in la hirgelyo habkaasi uu Nebi Muxammed () inooga keenay Ilaahay.
Waxaana inagu qasbaya isku-dayidda hirgelinta mabda’aasi sababo la xidhiidha habka naftiisa. Waayo isagoo keliya ayaa caddaynaya sharafta banii’aadmiga, siinayana gobanimada dhabta ah, kana xoraynaya addoonsiga. Isagoo keliya ayaa u xaqiijinaya gobanimo buuxda oo taasi ah, oo ku eg xuduudda aadaminimadiisa iyo addoonimadiisa Ilaahay. Wuxuu ka koraynayaa addoonsiga dadka, si uu Ilaahay oo keliya addoon ugu noqdo. Adduunyada oo idilina ma jiro hab kale oo aan Islaamka ahayn oo arrintaasi keenaya. Waayo Islaamku isagoo u qiraya Ilaaha Weyn oo keliya Ilaahnimo una oggol inuu keligii xaq uu u leeyahay inuu u dejiyo sharci nolosha banii’aadmiga, ayuu dadka u yeelayaa Ilaah keliya iyo Sayid keliya, una diidayaa inay qaarba qaar u noqdaan ilaahyo yar-yar, qaarba qaar xukun u-dejiyaan, qaarba qaar ka dhigtaan sayid iyadoo la addoonsanayo dadka ilaahyadaasi yar-yar siinaya ee u-qiraya sifooyinka ilaahnimada. Su’aalahaasina waa mid u gaar ah habkaasi Ilaahiga ah. Uguma gaar aha hadal ahaan iyo dood ahaan oo keliya. Laakiin wuxuu gaar ugu yahay run ahaan iyo dhab-ahaanba.
Dacwadii Rususha oo idilna waxay ahayd in Ilaahay oo keliya loo daayo Ilaahnimada, loona diido sifooyinka Ilaahay wixii kale ee aan Ilaahay ahayn, ee khalqigiisa ah ee sheeganaya kuna andacoonaya inay xaq u leeyihiin inay u-dejiyaan habab nolosha addoomada Ilaahay, taasi oo ay ku tageerayaan kuwa aan rumaysnayn midnimada Ilaahay!
Ilaahayna wuxuu ka yidhi Yuhuudda iyo Nasaarada:
“Waxay ka dhigteen baadariyadoodii iyo musheekhdoodii rabbiyaal aan Ilaahay ahayn, iyo Nebi Ciise ina Maryama. Waxa keliya ee la farayna waxay ahayd in ay Ilaahay oo keliya caabudaan, Isaga ma ahee ilaah kale ma jiro. Waanu ka nazahan yahay waxay ugu shariik yeelayaan.”
Run-ahaantii kuwaasi may caabudayn baadariyada iyo musheekhdaasi, ee waxay u oggolaayeen oo keliya xuquuqda u-dejinta sharciyada aan ka Ilaahay ahayn, iyo iyagoo u oggolaa inay u-dejiyaan hababka nolosha ee ku saabsan qawaaniinta. Wuxuuna Ilaahay ka yidhi:
“Waxay ka dhigteen baadariyadoodi iyo musheekhdoodii rabbiyaal, waxayna khilaafeen amarkii Ilaahay ee ah in loo daayo midnimo. Sidaasina waxay ku noqdeen mushrikiin.”
Waxay silsiladda Imaam Axmed iyo Tirmidi iyo Ibnu Jariir kasoo weriyeen Cuday ibnu Xaatim – Ilaahay raalli haka noqdee – markii uu soo gaadhay baaqii Rasuulka Ilaahay () ayuu u fakaday Shaam. Muddadii Jaahiliyadiina wuu kiristaanoobay. Waxaa lasoo xidhay walaashi iyo dad kale oo reerkiisa ahaa. Laakiin Rasuulkii Ilaahay wuxuu soo daayey walaashi. Waxay ku noqotay walaalkeed waxayna jeclaysiisay Islaamka, waxayna ku dhiirri-gelisay inuu hor tago Rasuulka. Cuday wuxuu yimid Madiina. Wuxuuna madax u ahaa reer Dayi. Aabbihii Xaatim Ad-Daa’i wuxuu caan ku ahaa gobanimada. Sidaasi awgeed ayey reer Madiina ugu ahaayeen diyaar imaatinkiisa. Markii uu u soo galay Nebigii () isagoo saliib dahab ah ku wata qoortiisa, wuxuuna Rasuulku () akhriyayey aayadda ah:
“Waxay ka dhigteen baadariyadoodii iyo musheekhdoodii rabbiyaal aan Ilaahay ahayn.”
Cuday baa yidhi: “Ma caabudaan.” Rasuulkii () wuxuu ku jawaabay, “Run-ahaantii way caabudaan, waxay u dideen xalaashii, waxayna u xalaaleeyeen xaaraantii, markaasi ayay sidaasi ku raaceen. Waana taasi caabudaadda ay caabudayaan.”
Islaamkuna waa ka keliya ee oggol in cibaadada lagu koobo Ilaahay oo keliya. Una keliyaynaya inuu isaga oo keliyi xaq u leeyahay inuu u-dejiyo hab-nolosha banii’aadmiga, Isagoo keliya ayaa dadka ka xoraynaya addoonsiga wixii aan Ilaahay ahaynba. Sidaas awgeed waxaa inagu waajib ah inaan isku dayno inaan hirgelinno habkaasi oo keliyi, wixii kalena dibedda loo tuuro. Waxaana innagu waajib ah inaan hirgelinno habkaasi, waayo – isagoo ah mid Ilaahay soo dejiyey – waa ka keliya ee ka madhan shahwaadka banii’aadmiga, jilicsanaanta aadmiga iyo damaca dadkuba iyo dano gaar ahaaneed oo lagu helo iyadoo loo dejisto qawaaniin, qawaaniintaasi oo u dan ah qofka sharcigaasi dejiyey, reerkiisa, dabaqaddiisa, shacbigiisa iyo jinsiyaddiisaba. Waayo habkaasi waxaa dejiyey Ilaahay Isagoo ah Rabbigii dadka oo idil. Uma dejin sharcigaasi danihiisa gaar- ahaaneed, ama inuu jeclaysto dabaqad banii’aadmiga kamid ah ama jeclaysto shacbi kamid ah shucuubta adduunka, ama inuu jinsiyad ka doorbido jinsiyadaha kale.
Sharciyanta aadamiga ee uu dejinayo qofka xukunka haystaa, ama reer xukunka haystaa ama dabaqad xukunka haystaa, ama ummadda xukunka haystaa, ama jinsiyad xukunka haystaa, waa mustaxiil inay marnaba ka madhnaato hawo iyadoo la tixgelinayo sida uu dadku u abuuran yahay ama ay ka maqnaato wax u dan ah oo maslaxadii ugu jirto kuwa sharcigaas dejiyey. Laakiin marka uu habka Ilaahay yahay ka xukumaya nolosha aadamiga waxaa la waayayaa sifadaasi, waxaana caddaanaya caddaaladdii runta ahayd, dhammays-tirnayd ee loo sinnaa. Taasoo aanu marnaba hab kale oo hababka banii’aadmiga kamid ahi lahayn, suuro-galna u ahayn inuu sidaasi oo kale u hirgeliyo. Waayo hababkaasi oo idil ma laha wax ka fogeeya hawada aadamiga jilicsanaanta dadka, iyo ka-fogaanshaha danaha gaar-ahaaneed weji kasta ha yeeshaan ee. Marka uu qof maqlo soo-jeedintaasi Rabbaaniga ah ee dheer ee lagu baaqayo hirgelinta caddaaladdaasi buuxda ee dhammaystiran ee aanay marnaba soo dhex galayn hawo, marnaba ayna soo dhex gelayn casabiyad iyo reer soo dhawayn ee ay kamid tahay hadalkii uu Ilaahay u soo jeediyey bulshadii Muslimka ahayd:
“Kuwa Ilaahay rumeeyayow, waxaad noqotaan qaar qumman Ilaahay hortiisa markhaatiina u ah dad u dhaxaynta, caddaaladda idin seejin, caddaalad sameeya iyadaa u dhaw Alle-ka-cabsiga ee. Ilaahayna ka cabsada. Ilaahay waa ku khabiir og waxaad samaynaysaan.” Waxaa laga yaabaa markaasi inay qof ku soo dhacdo oo uu is-yidhaahdo:
“Waa maxay dammaanadda ka dhigaysa bulshada Islaamka ah inay hirgeliso caddaladdaasi uu Ilaahay innoogu baaqayo ee uu ina farayo?”
Dammaanadda dhabta ah ee habkaasi Islaamka ahi waxay ku dhan tahay damiirka qofka Muslimka ah. Waxayna kasoo unkantaa iimaankiisa.
Marka iimaanka laga dhex helo diintani, waxaa laga dhex helayaa dammaanadda ugu xooggan.
Waxayna maqlayaan Ilaahay oo ku leh:
“Ilaahay guusha wuu siin kii u gar-gaara. Ilaahayna isagoo leh awood oo Caziiz ah, Ilaahay guusha ayuu siin kuwa haddii aanu talada dhulka u dhiibno oogaya salaadda, zakadana bixinaya, wanaaggana is-faraya, xumaantana diidaya. Caaqibada kama-dambaysta ahna Ilaahay uun baa iska leh.”
Waxayna ogsoonyihiin in aanu Ilaahay jeclaan doonin haddii ay jidka ka leexdaan. Bulshada Islaamka ah naf-ahaantooda ayaa ah dammaanad dhab ah ee hirgelinta tusaalooyinkaasi, waayo waxay ku taagan tahay caqiidadani, waxayna naf-ahaanteeda qaadaysana wixii uu Ilaahay ku waajibiyey. Waxayna ula muuqataa digniin xumaani kasoo gaadhaysa wax yar oo xilka laga jeedsadaa. Tiiyo dhibaatadaasi ayna gaadhayn oo qudha dulmiga gaystay. Haddaba waxaa innagu waajib ah in aan hirgelinno habkaasi, in aan hirgelinno caddaaladdaasi buuxda ee dhammaystiran ka helo garasho sax ah oo dhammaystiran ee aan ku hirgelayn iyadoo la raaco habkaasi gaarka ah mooyaane.
Waxaana innagu waajib ah in aan isku dayno hirgelinta habkaasi. Waayo waa habka keliya ee madax-bannaan go’aannada jahliga banii’aadmiga iyo gaabinta dadka, kana fog jilicsanaanta aadamiga. Waayo waxaa dejiyey kii abuuray banii’aadmigan ee og wixii hagaajinaya iyo wixii u dan ahba. Isagaana og waxyaalaha ku qarsoon koobnaantiisa iyo dhismihiisaba. Iyo waxyaalaha ku qarsoon xaaladaha adduunyadan ee noloshiis aadaminimo ku weheliya. Haddii uu u dejiyo habna waxaa habkaasi loo eegayaa arrimahaasi oo idil. Kuwaasoo aan suurogal u ahayn banii’aadmiga ha ahaadeen keli ama urur-ahaane xilli kasta oo waqtiyada kamid ah, iyo facyada oo idilba inay si dhammaystiran u fahmaan. Arrimahaasi qaar kamid ahi waxay u baahan yihiin waayo-aragnimo lasoo ururiyey oo ku saabsan tijaabooyinkii ay soo martay nolosha banii’aadmiga xilliyadii hore oo dhan, waqtigan aynu ku jirno iyo mustaqbalka aan weli la gaadhin. Taasi waa mustaxiil. Qaarkoodna waxay u baahan yihiin ogaanta dhammaan waxyaalaha ku qarsoon uunka ku xeeran banii’aadmiga. Taasina waa mustaxiil sidoo kale.
Waxaa intaas sii dheer, garaadka aadamiga suuragal uma aha inuu ka helo garasho sax ah oo dhammaystiran xataa oo keliya waayo-aragnimada iyo tijaabooyinkaas. Waayo waxaa ugu awood la’aantaasi dabeecaddiisa kala dhiman, ee aan dhammaystirnayn waxaana jiidanaya hawo iyo jilicsanaan. Sidaas awgeed kuma habboona inuu u dejiyo hab nolosha banii’aadmiga. Wuxuuna Ilaahay leeyahay:
“Haddii uu xaqu raaci lahaa hawooyinkooda waxaa fasahaadi lahaa samooyinka iyo arlada.”
Wuxuu kaloo leeyahay:
“Waxaanu kuu samaynay sharci la raaco, ee raac hana raacin hawada kuwa aan waxba garanayn.”
Dadka oo idili ma garanayaan. Cilmigaasi dhammaystiran, ee looga baahan yahay in lagu dejiyo nolosha aadamiga. Waxa keliya ee ay wataan waa hawo iyo jahli marka ay sanka la soo galaan wax aan waxba uga shan-iyo-toban, oo ayna iyagu lahayn. Astaamaha Ilaahiga ah ee ay ku andacoonayaanna waa dembi weyn iyo shar ballaadhan.
Waxaa innagu waajib ah in aan isku dayno hirgelinta habkaasi waayo waa habka keliya ee ku oogaya nidaamka nolosha aadamiga iyadoo salka ku haysa caddayn buuxda ee jiritaanka iyo kaalinta uu banii’aadmiga kaga jiro jiritaankaas, iyo himiladiisa aadaminimo. Taasi oo ah sida xaqiiqada ah ee dhabta aan ahaynna sida uu inoo sawirayaan jahliga tabaryarida iyo hawada aadamiguba aragti kale oo aan ta Rabbaaniga ahayn. Waana kani gundhigga keliya ee caafimaadka qaba, xogganna ee ku oogaya nidaamka nolosha aadamiga iyadoo haysata xididdada dabeecadda. Hab kasta ee nolosha banii’aadmiga ee aan ku qotomin gundhiggaasi cad ee dhammaystiran ma haysto xididdada dabiicadda.
Waana hab been-been ah suurogalna uma aha inuu sii waaro, waana halka ay ka soo unkamayso hoogga banii’aadmiga ilaa iyo inta oogan-yahayba. Ilaa ay bur-burinayso fidradoodu oo ay ku noqdaan asalkii xooganaa ee caafimaadka qabay. Caddayntaasi jiritaan ee ku jirta habkaasi Ilaahiga ahi, waa ta keliya ee saxa ah, waayo waxaa sameeyey kii jiritaankaba abuuray, dadkana abuuray ee og xaqiiqada jiritaanka iyo ta dadkaba.
Caddayn kasta oo lagu sifeeyo jiritaankan iyo kaalinta uu dadku kaga aadan-yahayba iyo himilada jiritaanka aadaminimo, ee uu sameeyey dadka naftiisu, waa caddayn kala dhiman. Waayo jiritaanka ayaa ka weyn dadka, suurogalna ma aha inuu dadku u sameeyo caddayn buuxda. Xaddidaadda, himilada, jiritaanka aadaminimo waxay u baahan-tahay cilmiga kii dadka abuuray iyo wuxuu uga dan lahaa abuuritaankiisa, sidoo kalena waxay u baahan-tahay in ay ka madhnaato hawada, si loo xaddido himiladaasi. Taasoo aan weligeed ka suuragelayn banii’aadmiga. Haddii dib loogu fiirsado dadaalka falsafadda ee isku dayday micnaynta jiritaanka iyo caddaynta kaalinta uu aadamigu kaga jiro, iyo micnaynta qaayaha jiritaanka aadaminimo, waxaa lala kulmayaa waxyaale lala yaabo oo lagu qoslo marka la arko sakhafadda iyo xumaanteeda. Ilaa uu dadku la yaabo: sidee bay aragtidaasi uga soo baxday faylasuuf. Ilaa uu xasuusto in faylasuufkaasi naftiisu uu yahay banii’aadmiga la siiyey oo keliya caqligi aadmiga taasi ma aha heerka caqliga aadamiga.
Dadkaasi falaasifada ahina waxay dhex gelayn bad aan cidi ka saari karin ilaa uu Ilaahay u qiil bixiyo mooyaane, oo uu meel kale uga dhexsaaro oo aan meeshaas hore ahayn.
Taasoo if ay wax ku arkaan uga baxo waana qaabka nolosha waaqiciga ah. Taasoo ah heerka khaliifnimada dhulka ee waafaqsan habkaas Ilaahiga ah, kuna xidhan fadliga iyo gargaarka Ilaahay, sida laga fahmay caddaymaha dhammaystiran ee jiritaanka, himilada aadaminimo, iyo hadalkiisa cad ee xaqa ah. Waxaana habkiisa ku dheehan caddayntaasi qadarku ku qotommo, aragtida aadamiga ee saxa ah, iyo qadarka uu ku qotomo nidaamka noloshiisu xididdada dabiiciga ah. Waxaa haddaba inagu waajib ah inaan isku dayno hirgelinta habkaasi si nidaamka nolosha aadamigu ugu qotonsato xididdada dabiiciga u ah. Mana jiro hab kale oo laga helayo astaantaasi loo baahan yahay. Ugu dambayn, waxaa innagu waajib ah in aan isku dayno hirgelinta habkaasi. Waayo waa habka keliya ee ku xidhan nidaamka koonka oo dhan. Waana in aanu dadku raacin hab aan ku xidhnayn nidaamkaasi. Waayo waxaa ku qasab ah in uu ku dhex-noolaado uunkan, iskaashina la yeesho nidaamkaasi uunka. Isku xidhnaanshaha ka dhexeeya habka nolosha iyo habka nolosha uunku waa ka keliya ee dadka u kafiilanaya inuu la kaashado xooggaga uunka ee weyn, halka ay iska hirdiyi lahaayeen. Marka uu la herdamana wuu burburi oo uu baabi’i. Umana gudanaayo xilkii ahaa khilaafada dhulka sidii uu Ilaahay rabay. Haddii uu ku xidhnaado nawaamiista uunka oo uu waafaqo, wuxuu heli sirta aqoonteeda, sakhiraadeeda iyo sidii uu noloshiisa ugaga faa’iidayn lahaa. Kuma guban doono dabka uunka ee wax buu ku karsan, diirsan shidanna doonaa. Fedrada aadamiguna asal ahaanteedu waxay ku xidhan tahay naamuuska uunka. Marka uu dadku ka saaro nidaamka noloshiisa naamuuskaasi, lama hirdamayo uunkaasi weyn oo keliya ee wuxuu weliba la hirdamayaa fidradiisa naf ahaanteeda. Wuu dhibaatoon, oo wuu is-cuni, wuu welweli, werwerna wuu dili, wuxuuna u noolaan sida uu maantaba banii’aadmigu ugu nool yahay cadaab iyo hoog, xataa tiiyo ay jiraan guulaha aqoonta oo dhammi iyo nolol sahlidda ilbaxnimada maadiga ahiba. Aadaminimada maanta waxaa haysta dhibaato, werwer, murugo iyo jaahwareer. Si ay uga cararto waaqaca dhabta ah ee nafteeda ayey isticmaashaa afyuun, xashiish iyo waxyaalaha dadka sakhraamiya. Waxayna samaysaa xawli waalan iyo muqaamaraad foolxun, tiiyo la haysto badhaadhaha maadiga ah, wax soo saar buuxa, nolol-sahlid iyo firaaqo badan. Run ahaantii madhnaanshahaasi, werwerkaasi iyo wareerkaasi way sii siyaadi uun, mar allaale marka uu si siyaadaba hor-u-markaasi maadiga ahi, iyo nolol sahliddaasi ilbaxnimada ahi, madhnaanshahaas wuxuu u eryanayaa aadaminimada sida shabax laga baqanayo. Wuu eryanayaa wayna ka cararaysaa. Laakiin sidaasi ayey dhammaan wareerkaasi foosha xun. Ra’yiga ugu horeeya ee ku soo dhacaya qof allaale qofkii booqda dalalka maalqabeenka ah ee leh nolol sahliddu ilbaxa ahi ee ay ugu horeeyaan Maraykanka iyo Iswiidhanka, waa in ay dadkaasi yihiin dad ka cararaya shabaxyo eryanaya. Kana cararaya naftooda hoos-ahaaneed.
Waxaana isla mar ahaantaaba u caddaanaya in maalqabiddaa maadiga ahi, raaxadaasi dareen iyo raaxadaasi jinsiguba ay u hoggaaminayaan inuu dhex muquurto cudurka casabiga ahi iyo kuwa nafsiga ahiba, leexasho jinsi ah, werwer joogto ah, xanuun iyo waalli, dembiyo foolxun oo joogto ah, iyo sharaf aadaminimo oo ka maqan noloshaba.
Aadaminimadu waxay keentay guulo waaweyn marka loo eego cilmi ahaan dhinaca caafimaadka, daaweynta cudurrada jidhka. Waxayna soo saartay daawooyin cusub iyo habab daaweyn iyo baarridba leh. Gaar ahaan soo-saaridda bensaliinta iyo mayosiinta.
Dhinaca soo-saaridda warshadaha waxaa la gaadhay wax u eg mucjiso. Tiiyo weli hor-u-marku sii socodo. Sidoo kale guulo waaweyn ayaa laga gaadhay ogaanshaha hawada sare, dayax-gacmeedyada, hirarka hawada, maraakiibta hawada. Tiiyo weli ay socoto. Laakiin waxaasi oo dhammi maxay u keeneen nolosha aadamiga? Maxayna u keeneen nolosha nafsiga ah? Ma la gaadhay badhaadhe? Ma la helay xasiloonaan? Ma la helay nabadgelyo? Waxaa la helay dhib, hoog, werwer iyo baqo, wax hor-u-mar ah oo laga gaadhay ma jiro samaynta hadafka nolosha aadamiga iyo qaayaha jiritaanka aadamiga.
Marka lays garab dhigo aragtida qofka ilbaxa ah ee qaayaha jiritaanka aadamiga iyo aragtida Islaamka ay qaayahaasi ka leedahay, waxay ilbaxnimada maanta lagu jiraa u muuqanaysaa mid ceebaysan oo shucuurta aadamiga meel ku xidhaysa kana yaraynaysa foojignaantiisa, jeclaysigiisa iyo dadnimadiisaba. Haddii aynu soo qaadano Maraykanka, waxay caabudayaan ilaahayo cusub oo ula muuqda qaayaha jiritaanka aadamiga: ilaaha lacagta, ilaaha dhadhanka, ilaaha sumcadda, ilaaha wax soo-saarka.
Sidaas awgeed ayayna dadku naftoodaba u helayn. Waayo maba hayaan qaayihii jiritaankooda aadaminimo. Sidaasi ayuu xaalkuna ahaa jaahiliyadihii hore ee caabudi jiray ilaahyadaas oo kale. Waayo ma hayaan Ilaahoodii runta ahaa. Tiiyoo ay waxaasi oo dhammi jiraan waxaa innagu waajib ah inaan isku daynno inaan habkaasi Ilaahiga ah ku hirgelinno nolosha banii’aadmiga, si aan aadaminimada ugu soo celinno Ilaahooda keliya, kuna soo celinno qaayaha jiritaanka ku laa’iqa ah banii’aadmiga. Kuna soo celinno naamuuska uuniga ah ee dhammaystiraya uunka oo dhan. Waana taasi xaqiiqada uu inoo soo bandhigayo Qur’aanku. Wuxuuna diidayaa arrinka kuwa doonaya in laysku xukumo wax aan sharciga Ilaahay ahayn, iyo habkiisa nololeed, kuwaasoo ku khilaafsan wax kasta jiritaankan ballaadhan. “Ma waxay doonaan wax aan diinta Ilaahay ahayn? Diintaasoo ay u hoggaansanaadeen waxa ku nool samooyinka iyo arladuba, ha dooneen ama yaanay doonin ee. Isagayna u noqon doonaan.”